China Iimpahla zeenja ezinemilenze emine Inja encinci Teddy Bichon Corgi Chihuahua Puppy Summer Coat mveliso kunye nabenzi | UMiaSein
Iingubo zenja Iingubo zemvula ezinemilenze emine Inja encinci uTeddy Bichon Corgi Chihuahua Puppy Iidyasi zasehlotyeni
Igama lemveliso: Iingubo zenja Iingubo zemvula ezinemilenze emine Inja encinci uTeddy Bichon Corgi Chihuahua Puppy Iidyasi zasehlotyeni
Phawu: Umhombiso, imfudumalo, Imvula
Uhlobo lwengubo: 50D ipholiyesta taffeta
Indlela yokuhlamba: Kungcono ukosula i-raincoat ngelaphu elomileyo emva kokusetyenziswa kwaye uyomise ngokwendalo. Sukusebenzisa isomisi. Sukuyivelisa i-raincoat ngqo elangeni. Uluhlu olungena manzi luya kuqhuma kwaye lwahlule kwaye luphulukane nokusebenza kwalo okungangeni manzi. Musa ukuyigcoba idyasi xa uyicoca. Izakwahlula i-PVC kunye nelaphu yenylon kwaye ibangele ukungena komoya kunye namagwebu. Ukuba umphezulu wengubo yemvula ungcolile, wosule ngelaphu elimanzi. Sukusebenzisa isepha, iblitshi okanye isepha eyomeleleyo yealkali.
Indlela yokugcina: Yoma kwindawo epholileyo kwaye uyisonge! Ukuba ayisetyenziswanga ixesha elide, kubalulekile ukuxhoma idyasi ukunqanda ivumba
Nceda uqaphele: Le mveliso iyilelwe kwaye yaveliswa yinkampani yethu ekhethekileyo. Le mveliso ayixhasi ulwenziwo. Ukwenzela ukuba inja ibe namava amahle okunxiba, nceda ulinganise umjikelo wentamo yenja, isangqa sentamo, ubude bomqolo kunye nolunye ulwazi oluyimfuneko. Ukucoca kunye nokugcina ngokungqongqo ngokucoca kunye neendlela zokugcina. Le mveliso icekeceke kakhulu, ke sukuyibeka kwizinto ezibukhali. Ukuba isilwanyana siziva singonwabanga emva kokunxiba, nceda usisuse ngokukhawuleza ukunqanda iingozi ezinje ngokulimala kwesilwanyana. Emva kokunxiba, nceda ukhulule iqhosha rhoqo ukuze ulusu lwesilwanyana luphefumle, ukuthintela ukuchaphazela ukukhula kweenwele zezilwanyana okanye ukubangela isifo solusu ngenxa yokuthamba. Ukuba awonelisekanga yile mveliso, nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi.
Egqithileyo Iingubo zePuppy zeNja yabasetyhini iTeddy Bichon Cotton Coat Chihuahua Bulldog Corgi Iinjana ezincinci ziqinisa ukuwa kwePet yasekwindla nasebusika Coat
Okulandelayo: Iingubo zenja Intwasahlobo kunye neAntumn Coat Imilenze emibini yeeJesi yeeSweta zePuppy Izambatho zePetethi ezincinci ezinokuphefumla
Inja eNtsha yokuXhatshazwa kweNdoda eyiNja yePhysical Pant ...
Uboya bokuSusa ikama Teddy Encinci Inja yeKati Ukucoca ...
Ikati elula encinci enye yokunyuka kwesakhelo seCisal C ...
Ikati yeNest Cat yokulala Mat inokususwa ...